Home Horyaalka Ingiriiska Manchester United oo isha ku heysa midkood Lautaro Martinez, ama Milan Skriniar
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay u sheegtay kooxda Inter Milan in deynta la xiriirta Romelu Lukaku la sixi karo hadii ay fursad u helaan inay la soo wareegaan midkood Lautaro Martinez ama Milan Skriniar .
Lukaku ayaa kaga soo biiray Inter kooxda Man United sanadkii 2019, laakiin kooxda reer Talyaani ayaa ku bixineysa lacagta qeyb ka mid ah maadaama aysan awoodin inay ku qarashgareeyaan € 80m (£ 69m) hal xidig
Sida laga soo xigtay Corriere dello Sport , kooxda Serie A ka dhisan ayaa seegtay lacag bixinta madaama ay dhaqaale ahaan la dhibtoonayaan cudurka faafa ee coronavirus, taasoo keentay inay ku helaan 50m (£ 43m) oo deyn ah.
Warbixinta ayaa sheegeysa in kooxda Ole Gunnar Solskjaer ay ka wada hadleen suurtagalnimada inay la soo saxiixdaan midkood Martinez ama Skriniar si deynta loo xaliyo.
Skriniar ayaa lala xiriirinayay inuu ka tagayo San Siro 12-kii bilood ee la soo dhaafay, iyadoo 26-jirka daafaca dhexe horay loola xiriiriyay kooxaha Manchester City iyo Tottenham Hotspur .
Dhanka kale Martinez ayaa si xoogan loola xiriirinayay Barcelona , laakiin ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Argentina ayaa dhawaan sheegay inuu qarka u saaran yahay inuu qandaraas cusub u saxiixo kooxda reer Talyaani.
Previous articleFabrizio Romano: ‘Arsenal Waxa Ay Xiiseyneysaa Tariq Lamptey’
Next articleManchester City oo xiiseyneysa saxiixa Robin Gosens